Xayawaanku wuxuu masaxaa alaab-qeybiyeyaasha - Dukaanka Jumlada Soo saareyaasha Soosaarayaasha, Warshadda
Nadiifinta waxtar leh nadiifinta nadiifinta nadiifinta ee saaxiibtinimada leh
Masaxayaasha Better Better waa baalal ammaan leh oo bay'adeedna u fiican oo masaxaya iyo masaxa qurxinta. Qoyaanka iyo dhumucda dheeriga ah, tirtiraha saaxiibtinimada leh ee xayawaanku waxay ku habboon yihiin jaakadaha, dharka, cagaha, badhida iyo meydadka eeyaha iyo bisadaha. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa sida masaxaada eeyaha.
Tayo tayo sare leh oo lagu nadiifiyo xayawaanka la dhaqo eeyaha
Masaxa xayawaanku waxay ku habboon yihiin tirtirka masaxa eeyaha iyo bisadaha, eeyaha iyo bisadaha. Waxay ka kooban tahay aloe vera cusub iyo fiitamiin E. tirtirkaani wuxuu baabiin karaa urka xayawaanka
Nadiifinta Xayawaanada Caruurta Lagu nadiifiyo
Eygaaga ayaa ku kacaya kaadida iyo nooc kasta oo ah "waxyaabo" xun intii ay socdeen, ka dibna wuxuu ku ordayaa gurigaaga, wuxuu ku boodayaa sariirtaada wuxuuna ku foorarsanayaa barkintaada. Waxaa ku filan.